रोग निको पार्ने भन्दै पाष्टरले गरे पटक पटक बलात्कार « Janata Times
२९ पुस २०७६, मंगलबार ००:००
रोग निको पार्ने भन्दै पाष्टरले गरे पटक पटक बलात्कार
ललितपुर, पुस २९ । जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा ललितपुरबाट एक जना पाष्टर पक्राउ परेका छन । ललितपुरको कुसुन्तीस्थित आशा विश्वासी मण्डली चर्चका पाष्टर ध्रुवबाबु भनिने विश्वास जोशीलाई प्रहरीले जवरजस्ती करणी अभियोगमा पक्राउ गरेको हो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरका डीएसपी सन्तोष तामाङका अनुसार जोशीलाई सोमबार साँझ पक्राउ गरिएको हो । चर्चमा नियमित आइरहने एक महिलाले उजुरीले दिएपछि उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको डिएसपी तामाङले बताउनु भयो ।
प्रहरीका अनुसार पाष्टरले आफूसँग यौन सम्पर्क राखे रोग निको हुने आश्वसन देखाएर ती महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेका थिए । पछिल्लो पटक चापागाउँको एक गेष्ट हाउसमा बोलाएर उनले जबरजस्तीकरणी गरेको पीडितले दिएको जोहरीमा उल्लेख छ ।
उनले नराम्रा काम गरेकाले रोग लागेको बताउँदै आफूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पाप नष्ट हुने पनि आवश्सन दिने गरेको जोहरीमा भनिएको छ । तर, सम्बन्धबारे कसैसँग भने परमेश्वरले दिएको शक्ति नष्ट हुने भन्दै उनले धम्की समेत दिएको जनाइएको छ । पहिलो पटक महिलाले जोशीको विश्वासमा परेर उनले भनेअनुसार गरे पनि पटकपटक सम्बन्ध राख्न खोज्दा यो प्रकरण बाहिर आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिद्धारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज
जसपाका सांसदका लागि सनसिटीमा फल्याट उपहार : यादव समुहमा बढ्यो असन्तुष्टी
सुजिता हत्या प्रकरणमा नयाँ खुलासा : दाजुसँग प्रेम सम्बन्ध, बिहे गर्न नपाएपछि आत्महत्या
चितवन, साउन ८ । अपरहणमा परेकी भनिएकी पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका ३ की सुजिता भण्डारीले
वाचा पूरा गरेरै छाडिने छ, जति महँगो भए पनि सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइने छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, साउन ८ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठनका सन्दर्भमा गरेका वाचा पूरा गरेरै छाडिने
सुजिता भण्डारी हत्या परिवारभित्रैबाट, ठूलो बुवाका छोरा पक्राउ
चितवन, साउन ९ । सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा उनैका ठूलो बुवाका छोरा मुछिएका छन् ।चितवन
बाबुराम भट्टराईमाथि कडा कार्वाही गर्न माग
काठमाडौं, साउन ८ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघिी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई
महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्दै कांग्रेस
काठमाडौं, साउन ८ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आसन्न १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्नेबारे छलफल
सिआइवीले समात्यो वर्किङ भिषामा अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोह
काठमाडौं, साउन ८ । वर्किङ भिषामा अमेरिका पठाने भन्दै ठगी गर्ने समुहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको
सभामुख भेटेर भीम रावलले फिर्ता लिए राजीनामा
काठमाडौं, साउन ८ । एमाले उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिनुभएको
देउवा सरकारको अर्को चमत्कार, बालात्कार आरोपी ससुराली खलक डिआईजीमा बढुवा सिफारिस
काठमाडौँ, साउन ८ । बलात्कार आरोपी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सौरभ राणा प्रहरी नायव महानिरीक्षक